Mihevaheva Mitety an’i Singapore · Global Voices teny Malagasy
Mihevaheva Mitety an'i Singapore	Voadika ny 07 Febroary 2013 10:17 GMT
Zarao: ‘Nihevaheva’ (nanao lévitation) nitety an'i Singapore i Jayden Tan sy i Jeff Cheong ary nampianatra ireo mpianatra ny tsiambaratelon'ny fakana sary mihevaheva. Nahasarika ny tao Singapore ny tetikasan-dry zareo ary maro ny olona no nahamarika ny famoronana nataon-dry zareo eo amin'ny sehatry ny fakana saripika.
We take this levitating photography seriously. Its all done without any cables, its all sweat and passion. No photoshop no touch ups. We only colour correct the photo to create a certain mood okies Noraisinay matotra mihitsy ity fakana sary mihevaheva ity. Vita tsy nasiana tady mahazaka na tari-by, fa hatsemboahana sy fitiavana. Tsy natao photoshop tsy namboamboarina. Ny loko ihany no nahitsy mba hanatsarana ny ambiansy Nanome alalana anay hizara ny saripika mahafinaritra vitany ho hitan'ny mpamakin'ny Global Voices i Jayden sy i Jeff . Eto ambany ny tafatafa amin'ny alalan'ny mailaka izay nifanaovanay tamin-dry zareo.
Inona no nahatonga anareo hanao ity tetikasa ity? Oviana ianareo no nanomboka ity tetikasa ity?
Nalaza tamin'ny fanaovana saripikam-pihevahevana mihaika ny herim-panintonan'ny tany i Natsumi Hayashi . Ary nanomboka hatreo, maro tamin'ny olona avy ao Azia sy nanerana izao tontolo izao no niditra tamin'ilay kiry ka nifampizara sarim-pitsingevana rehefa mankany amin'ny asany andavanandro. Nanomboka ny pejy Facebook izahay tany amin'ny volana jolay tamin'ity taona ity.
Ahoana ny fihetseham-po azonareo tamin'ny vondro-piarahamonina teto an-toerana?
Maro ny vondrona ao Singapore no naka sary am-pihevahevana. Ampiraisin'ny fitiavana mitovy izahay ary mahafinaritra ny mahita ny gazety eto an-toerana mitatitra ity zava-mahaliana manokana ny vondron'olona io eo amin'ny pejy voalohany!
Inona avy ny sary tena nankafizinao tao amin'ny tetikasa?
Tianay ny raki-tsary farany nandrindra ny krisimasy tamin'ny herintaona. Niara-niasa tamin'ny mpandihy, bilaogeran'ny sakafo ary ny sasany amin'ny namanay izahay. Fanapihana sary tsy mahazatra miaraka amin'ny vondron'olona maro. Ny Krisimasy aty amin'ny troplikaly ny lohahevitra ka eritreretinay fa nanokatra ny maso nahatonga ny fampielezana ny hafaliana amin'ny krismasy izany.
Ny anankiray hafa tianay indray dia ny rakitsary nopihana tany amin'ny seranam-piaramanidin'i Singapore Changi . Tsara vintana izahay nahazo alalana haka sary tao amin'ny faritry ny lalantsaran'ny fanondranana entana (transit) . Manana habaka tena mahafinaritra ny seranam-piaramanidina sy mahaliana tahaka ny zaridainan'ny lolo, ny sokitra andon'orana manome endrika zavatra hafa [sary](mahavalalanina) ary ny tafo dobo filomanosana.
Drafitra amin'ity taona ity raha iompanana amin'ny tetikasam-pihevahevana
Mbola hotohizanay ny fiama-boly sy ny famoronana tantara vaovao ary hanao fanamby amin'ny tenanay izahay hahavita mihoatra aminizay efa vitanay tamin'ny raki-tsary teo aloha.
Farany teo izahay afa-nizara ny asanay tamin'ny tanora mpianatra. Sy ny lafiny manala voly amin'ny zavatra mila fahaizana (talenta) hozaraina.
Mila asa mafy hahazoana ny pika tonga lafatra ny fakana sary mihevaheva.
Manavatsava ao anatin'izany ny leson'ny fikirizana, ny faharetana ary ny fitadiavana ny lavorary ka mizara izany amin'ny fanolora-tena manokana izahay. Mifarana amin'ny alalan'ny lesona azo tsapain-tanana amin'izany atao hoe miasa izany ny fotoam-pianarana indray mandeha.
Fa rehefa mahita ny valiny ry zareo, dia tonga ny rehareha sy ny [tsinjaka] ka mahatonga an-dry zalahy sy zavavy fahatsapana ho tahaka ny nahavita zavatra tsy azo tanterahana aza.
Vakio amin'ny teny русский, 日本語, Español, বাংলা, Português, Italiano, Nederlands, Català, polski, Français, македонски, 繁體中文, 简体中文, English
HevitraMediam-bahoakaSaripikaTsidikaZavakanto & Kolontsaina